Ụlọ nsọ Megalithic nke Malta | Akụkọ njem
Ụwa nwere ọtụtụ ebe di omimi, nke ndị a na -amaghị nke ọma na a na -eche ọtụtụ ihe. Malta bụ otu n'ime ha ma ọ bụ, ọkachasị, ndị ụlọ nsọ megalithic nke Malta. Ị maara ha? Ọ bụ na ha agbasaghị gị?
Malta bụ akụkụ nke European Union na agbanyeghị na ọ bụ obere obodo bụ ebe ọtụtụ mmadụ bi. N'ebe a, na mpaghara ala a dị ịtụnanya taa ndị nleta na -eleta nke ukwuu maka ihu igwe na -ekpo ọkụ, enwere atọ Ihe Nketa Worldwa na ọtụtụ ụlọ nsọ megalithic nke so n'ime ndị kacha ochie na ndị kacha dị omimi n'ụwa.
2 Ụlọ nsọ Megalithic nke Malta
Ọ bụ steeti kwụụrụ onwe ya nke dị na ndịda Ịtali nakwa na ọ bụ ezie na ọ nọ na ebere mba dị iche iche n'ime akụkọ ntolite ya niile, ọ bụ, kemgbe 1964, nwere onwe ya n'ezie. Ọ bụ a agwaetiti mejupụtara agwaetiti atọ, Malta n'onwe ya, Gozo na Comino. E nwekwara obere agwaetiti ndị ọzọ.
Ihu igwe nke Malta bụ na -ekpo ọkụ n'oge ọkọchị na n'oge oyi, mmiri anaghị ezo. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị njem ji aga. Maka osimiri ya na o doro anya, maka ụlọ arụsị megalithic ndị a na -achọsi ike.
Enwere ụlọ arụsị megalithic asaa na Malta nke UNESCO matara dị ka saịtị ihe nketa ụwas. Ha nọ na Malta na agwaetiti Gozo. Na nke mbụ enwere ụlọ nsọ nke Hagar Qim, Mnajdra na Tarxien, Ta'Hagrat na Skorba ebe na Gozo enwere nnukwu ụlọ arụsị abụọ nke Ggantija.
Ihe niile bụ nnukwu ihe owuwu prehistoric kwenyere na e wuru ya na narị afọ nke anọ na nke atọ BC Ha so na ntọala ntọala mbụ nke ụwa ma na -egbu egbu maka ụdị na ihe ịchọ mma ha. Nke bụ eziokwu bụ na mgbagwoju anya ọ bụla pụrụ iche na ọkaibe maka mmezu teknụzụ ha na -egosi.
Ndị ọkachamara na -ekwu na ihe ncheta ọ bụla nwere usoro dị iche, atụmatụ na nka n'agbanyeghị e nwere ụfọdụ àgwà dị ka patio elliptical n'ihu na concave facade. N'ozuzu, ọnụ ụzọ ahụ dị n'ihu, n'etiti facade ahụ, ọ na-emepe n'elu nnukwu ebe nwere ogige nwere oghere na ime mejupụtara ime ụlọ nwere okirikiri okirikiri nke edoziri n'ụzọ ọ bụla n'akụkụ axis ụlọ ahụ.
Ọnụ ụlọ ndị a na -adịgasị iche dabere na ụlọ ahụ, mgbe ụfọdụ enwere ụlọ atọ, mgbe ụfọdụ anọ ma ọ bụ ise, ma eleghị anya isii. Enwere nkume kwụ ọtọ na nnukwu okwute ndị kwụ ọtọEkwenyere na e nwere elu ụlọ na ihe niile na -egosi na usoro ihe owuwu na -ekpughe ọtụtụ ọkaibe. Nkume e ji mee ya dị na mpaghara, ọ bụ nkume nkume coral maka mgbidi mpụga na a nro dị larịị maka ime na ihe eji achọ mma. Ee, enwere ụfọdụ ihe ịchọ mma n'ime ụlọ ahụ, ha na -egosikwa oke aka nka.
Nke gini ihe eji achọ mma Anyị na -ekwu? Ogwe ndị nwere oghere, mkpagharị gburugburu, osisi, osisi na anụmanụ adịghị ụkọ. Ekwenyere, site na ihe owuwu ụlọ na ihe ịchọ mma, na ụlọ ochie ndị a mezuru ụfọdụ ọrụ emume maka ọha wuru ha.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozi niile ị ga -ahụ maka ụlọ nsọ megalithic nke Malta sitere na Ọkà mmụta ihe ochie. Sayensị a, site na nyocha ọkpụkpụ, iberibe seramiiki na ụdị dị iche iche, ewepụtala nke ahụ Ụmụ mmadụ biri na Malta kemgbe opekata mpe 5200 BC. Ha biri n'ọgba mana ha mechara wuo ụlọ na obodo niile. Ekwenyere na karịa ma ọ bụ obere mgbe afọ 1600 rutere n'agwaetiti ahụ, ha malitere iwu nnukwu ụlọ arụsị ndị a, nke taa anyị na -ahụ naanị ihe dị ka ọkpụkpụ ha.
Mgbe obere oge nke ebube na ịma mma ọ dị ka N'ihe dị ka 2300 BC tupu ọdịbendị a dị egwu malitere ịbelata ngwa ngwa.na. Maka gịnị? Ekwenyere na n'ihi oke oke oke ohia, oke ala, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na iji akụrụngwa maka ọrụ ugbo ... Agbanyeghị, ihe ọ bụla merenụ, ọdịbendị Malta dara wee ruo mgbe ndị mmadụ rutere n'ọgbọ ọla kọpa n'ihe dị ka 2000 BC. C agwaetiti ahụ gbahapụrụ.
Mkpọmkpọ ebe kacha mara amara bụ ụlọ nsọ Hagar Qim na nke Mnajdra, n'ụsọ oké osimiri ndịda ọdịda anyanwụ nke Malta, na-ele anya n'oké osimiri gaa n'àgwàetiti Filfla nke mmadụ na-ebighị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita ise site na ya. Mbara ala a nwere ụdị limestone abụọ, nke dị ala na nke siri ike nke a na -eji na Mnajdra na nke dị elu ma dị nro nke ejiri na Hagar Qim.
Hagar Qim Ọ pụtara 'okwute guzo ọtọ' na tupu mkpọmkpọ ebe ahụ apụta, e ji mkputamkpu okwute kpuchie ha, nke naanị nnukwu okwute ole na ole guzoro na ya. Ekwenyere na a rụrụ ụlọ nsọ ahụ na nkebi n'etiti 3500 BC na 2900 BC na o nwere okwute ndị kacha ibu n'agwaetiti ahụ. Enwere nnukwu okwute asaa mita na mita atọ ma tụọ ihe dị ka tọn 20.
Ebu ụzọ nyocha mkpọmkpọ ebe ahụ na 1839 na arụpụtara ihe ndị ka njọ n'etiti 1885 na 1910. N'ihe banyere lỤlọ arụsị nke Mnajdra dị ihe dịka mita 500 n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Hagar Qim, n'akụkụ ọnụ ọnụ ugwu nke chere oké osimiri ihu. Ihe mgbagwoju anya nwere ụlọ abụọ, nnukwu ụlọ nsọ nwere ọnụ ụlọ elliptical na obere ụlọ nsọ nwere ọnụ ụlọ ọzọ.
Ụlọ nsọ nke nyocha mbara igwe? Nwere ike. Ọnụ ụzọ mbata na -eche ihu n'ebe ọwụwa anyanwụ yana n'oge mgbụsị akwụkwọ na oge opupu ihe ubi ụzarị mbụ nke anyanwụ na -ada n'elu okwute n'elu mgbidi nke ụlọ nke abụọ. N’oge ọkọchị na udu mmiri, anyanwụ na -enye ìhè nkuku nke ogidi abụọ ndị dị na ngọngọ nke na -ejikọ ọnụ ụlọ ndị bụ isi.
Ọ bụ ihe ịtụnanya kemgbe Ụlọ ụlọ nsọ abụọ ahụ jikọtara na mbara igwe ọ bụghịkwa naanị otu ugboro n'ụbọchị mana ọtụtụ oge: na Hagar Qim, dịka ọmụmaatụ, mgbe chi bọrọ, ụzarị anyanwụ na -agabiga ihe a maara dị ka ime ime wee gosipụta onyogho diski nke nwere oke nha ka ihe a na -ahụ ya na ọnwa na, ka nkeji na -agafe, diski ahụ na -eto wee bụrụ ellipse. Nhazi ọzọ na -eme mgbe anyanwụ dara.
Eziokwu bụ na ajụjụ ndị a na -enyocha mbara igwe dị ụkọ n'ihi na ọ bụrụ na anyị kwenyere na nkà mmụta ihe ochie nke oge ochie ihe ọmụma ahụ…. Enwere data na -ezighi ezi. Ndị nchọpụta ndị ọzọ na -atụ aro echiche ndị ọzọ na -adọrọ mmasị. A na -akpọ mgbanwe ndị a teknụzụ dị ka "obliquity nke ellipsis" ma nwee ogo 23 na nkeji 27.
Ya mere, a na -ekpughere oke okirikiri ihe karịrị puku afọ iri anọ ma ọ bụrụ na nhazi ahụ etoruola nke ọma, ha ga -etinye ogo nke njehie nke kpatara mgbanwe a na -agbanwe agbanwe. Site na njehie a, ọ ga -ekwe omume ịgbakọ kpọmkwem ụbọchị a ga -ewu ụlọ arụsị ahụ.
Yabụ, n'ihe gbasara ụlọ nsọ Mnajdra, nhazi ha dị mma mana ọ bụghị nke zuru oke. Yabụ na ngụkọta oge a na -egosi na nhazi zuru oke ga -abụrịrị opekata mpe ugboro abụọ n'ime afọ 15 gara aga: otu ugboro na 3700 BC na otu tupu, na 10.205 BC. Ha tọrọ ihe a na -ekwu.
Ọ dị obere ... Mana ihe na -agbakwụnye ihe omimi bụ na karịa mmekọrịta ya na kpakpando ụlọ arụsị megalithic nke Malta na -ekpughe oke mgbakọ na mwepụ na injinịa. Ị maara? Eleghị anya ọ bụghị, n'ihi na ihe metụtara kpakpando, mgbakọ na mwepụ, na injinịa rụzuru n'ozuzu ha anọghị na nkà mmụta ihe ochie. Ọzọkwa, ọ nweghị ihe dị n'ụwa nke yiri ụlọ nsọ ndị a otu a ịdị adị ya dị egwu.
N'ikpeazụ, anyị enweghị ike ichefu ihe mgbagwoju anya nke Ụlọ nsọ Hal Saflienimara dika Hypogeum. Ọ nwere ọkwa atọ dị n'ime ala dị mita 12 n'ogologo, steepụ okirikiri na -agbada na ime ụlọ abụọ a maara dị ka Oracle na Sancta Sanctorum. E nwekwara Ụlọ nsọ Tarxien, n'ime nke a nnukwu ihe a kpụrụ akpụ na ịdị elu mbụ ya dị mita abụọ na ọkara, e mere ya baptizim dị ka Nne Chukwu.
Ndị Ụlọ arụsị Tas-Silg na ụlọ arụsị Skorba na okporo ụzọ dị iche iche a pịrị apị na ala achọtara n'akụkụ dị iche iche nke Malta wee jikọta n'oké osimiri. Ha dị ka akara wheel mana n'ezie ha abụghị. Gịnịkwa ka ha bụ? Ọfọn, ihe omimi ọzọ.
Ma n'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere enyo, ịtụgharị uche, ntụnye, echiche na ihe ndị ọzọ na enwere gburugburu ụlọ nsọ megalithic nke Malta enwere ọtụtụ akwụkwọ na webụsaịtị na -atọ ụtọ. Ụzọ mbụ m siri zute ihe omimi a sitere n'aka ndị ama ama: Erich Von Daniken.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Malta » Ụlọ nsọ Megalithic nke Malta